H.E. U Myo Tint Presents Credentials to President of the Republic of Chile – Ministry of Foreign Affairs
H.E. U Myo Tint Presents Credentials to President of the Republic of Chile
U Myo Tint, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Republic of Chile, presented his Credentials to His Excellency Mr. Sebastian Piñera Echenique, President of the Republic of Chile, on2October 2019, in Santiago.
Dated. 8 October 2019
သံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးတင့် ချီလီသမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတထံ ခန့်အပ်လွှာပေးအပ်
ချီလီသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးတင့်သည် ၎င်း၏ ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင် ဆန်တီယာဂိုမြို့၌ ချီလီသမ္မတနိုင်ငံသမ္မတ မစ္စတာ ဆဲဘာစတီရန် ပီညှဲရာ အဲချ်နိခ်ထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်